Virosy vaovao ho an'ny Mac OS X dia mety hamela ny kapila mafy ampiasainao | Avy amin'ny mac aho
Virosy vaovao ho an'ny Mac OS X dia afaka manadino ny kapila mafy ataonao
Luis Padilla | | About us, OS X El Capitan
Heveriko fa ity no vao voalohany nahitako fandrahonana tena lehibe hatramin'ny naha mpampiasa ahy Mac ahy, ary efa taona vitsivitsy izay. Andro vitsy lasa izay dia nahita ny vaovao tsara misy fanavaozana azo alaina ao amin'ny Trnasmission izahay, iray amin'ireo mpanjifa tsara indrindra ho an'ny Torrents azo alaina amin'ny OS X. Eny, ity fanavaozana ity (2.90) dia misy virus sasany izay mety hahatonga ny kapila mafy ataonao tsy misy antony. Raha mpampiasa Transmission ianao dia liana amin'ny famakiana amin'ny antsipiriany ity vaovao ity.
Ity no tranga voalohany "ransomware" fantatra voalohany ho an'ny OS X. Ity malware ity, izay apetraka miaraka amin'ny fanavaozana ny Transmission 2.90, dia tompon'andraikitra amin'ny famonoana ny kapila mafy nataonao telo andro taorian'ny nametrahana azy, ka tsy ho azo idirana ny data ao amin'ilay kapila ho an'ny mpampiasa. Mba hamerenana indray ny fidirana amin'izy ireo dia "vidim-panavotana" (ransom) no tsy maintsy aloa. Ity malware ity, antsoina hoe "KeRanger", dia efa nampandrenesina tamin'i Apple ary ny orinasa dia niasa tamin'ny alàlan'ny rafitra fiarovana azy ho an'ny OS X, Gatekeeper, izay hisakana anao tsy afaka mametraka ity kinova Transmission ity, fa ireo izay efa nametraka azy kosa tsy voaro. Raha efa nametraka ny kinova 2.90 an'ny Transmission ianao dia tokony hanavao avy hatrany ilay kinova 2.91 vaovao izay efa azo apetraka.
Raha te hanamarina ianao raha voan'ny "KeRanger" dia azonao atao ny manokatra ny application "Monitor". ao anatin'ny fampirimana «Applications> Utilities». Tadiavo ny fizotry ny "kernel_process", raha hitanao io dia voan'ny aretina ianao, raha tsy mahita ianao dia aza manahy. Raha izany dia tsara kokoa ny miverina amin'ny kinova amin'ny rafitra alohan'ny fametrahana ny Transmission, ary mazava ho azy avy eo esory ny fampiharana ary apetraho ilay kinova vaovao. Na dia tsy voan'ny aretina aza ianao dia manavao ilay kinova vaovao azonao sintonina avy eto.
Fanambarana milaza fa tsy misy ifandraisany
Mazava ho azy fa milaza ny mpamorona ny Transmission fa tsy misy ifandraisany amin'ity fanafihana ity. Ny fomba nahatratraran'ireo mpampiditra voa ny lohamilina ofisialin'ny fampiharana dia mbola tsy fantatra ihany, fa angamba ankoatry ny famindrana ny installer dia ho voajirika ny tranokalanao ary hanampy miaraka amin'ireo KeRanger ireo malware ireo. Araka ny teny ofisialin'ny mpamolavola azy dia madio avokoa ireo mpampiditra izay hita ao amin'ny tranokalan'ny ofisialiny ankehitriny ary antenaina fa tsy maro no ho voakasik'ity malware ity. Manana fampahalalana bebe kokoa ianao ao Ity rohy ity.
Ary araka ny lazainay hatrany, amin'ny Mac dia tsy ilaina ny manana antivirus satria ara-dalàna, miaraka amin'ny fahatsapana mahazatra kely dia manakana ny malware tsy hiditra ao amin'ny solosaintsika Apple isika, na izany aza, mety tsy hahita ny fametrahana azy ianao. Ho an'izay dia arosonay ity lisitry ny antivirus tsara indrindra ho an'ny Mac.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Virosy vaovao ho an'ny Mac OS X dia afaka manadino ny kapila mafy ataonao
Alatz (@Alatzobitx) dia hoy izy:
Mitovy amin'ny "kernel task" ve ny "processeur kernel"?
Mamaly an'i Alatz (@Alatzobitx)
(@Fanny_) dia hoy izy:
kernel asa dia izao
Mamaly an'i ΚΕΦΑΛΗΞΘ (@Closernin)
Tsy voan'ny otrikaretina aho ... ufff Joer lasa mainty izay mahazo azy.
Francisco Uceta Rodriguez dia hoy izy:
Fifaliana re izany! Tratry ny virus Chernobyl taloha aho taloha. Fotoana nahafinaritra indrindra nataoko!
Valiny tamin'i Francisco Uceta Rodríguez
Kattia Milena Quesada Quirós dia hoy izy:
Valiny tamin'i Kattia Milena Quesada Quirós
Rachel Vargas dia hoy izy:
ary efa hitako ny «Delete» .. Fn + Delete… 🙂
Valiny tamin'i Raquel Vargas
Heveriko fa kernel_service io fa tsy kernel_service
Antonio Lopez dia hoy izy:
Valiny tamin'i Antonio López
Tsy viriosy io; Trojan io.
David Torres Ruiz dia hoy izy:
Mety hitovy amin'ny dingana antsoina hoe KernelEventAgent ve izany?
Valiny tamin'i David Torres Ruiz
Apple hanatsara ny dividendany telovolana atsy ho atsy
Apple manamboatra ny bibikely Mac Ethernet, "Mieritrereta hafa" dia mbola velona ao amin'ny Apple, ny beta fahadimy ho an'ny rafitra ho avy dia tonga amin'ireo mpamorona, ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho